I-Coronavirus covid-19 kunye nesayensi: Ingena njani emzimbeni wakho kwaye uyidlulisela njani? : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	4 Aprili 2020	• 40 Comments
Kukho isizathu esilula sokuba usithi intsholongwane ngokubanzi ayinosulelo kwaye kutheni imovie ezinje ngezantsi yeli nqaku ziimifanekiso bhanyabhanya ezihonjiswe kakuhle. Kungenxa yokuba intsholongwane ayinakonakala okanye ihambe yodwa; Kananjalo ayisosibhakera, ayisosibungu.
Intsholongwane inokuthelekiswa nokunamathela kwikhompyuter okanye kwi-CD-rom kumdlali weqonga. Intsholongwane yiphakheji ye-RNA ne-DNA. Oku kuphethe ulwazi. Ukuba ukunamathela akukho khompyutheni, akukho nto yenzekayo kwidatha ekunamathelayo. Kufuneka zifundwe kwakamsinya nje ukuba zinamathele kwi-PC. I-CD-ROM engekho kumdlali nayo ayonto. Akukho nto ngaphandle kwe-disc ekhanyayo.
Ukuba kufuneka sikholelwe unjingalwazi onjingalwazi uHuub Savelkoul (ukusuka kwividiyo engezantsi), intsholongwane inokuba sezandleni zakho, umzekelo. Ngoku sazi ukusuka (ngezantsi) ividiyo yesayensi evela kwiYunivesithi yaseKahn ukuba intsholongwane kufuneka ithathwe siseli ephilayo. Iseli ephilayo kufuneka ifumane intsholongwane. Nje ukuba ifakwe siseli ephilayo, inokusebenza, kanye njengokuncamathela xa ivuliwe xa ikwikhompyuter. (Funda ngakumbi apha ngezantsi)
Ukusuka kumhla wamashumi amabini anesibini kwividiyo engezantsi, kucacile ukuba lo profesa unjingalwazi uHuub Savelkoul unokuba uyahlekisa.
Ukufumana oku, zibuze ukuba ngaba iiseli zakho zolusu lwezandla zakho zahlukile kwiiseli zolusu ezingalweni zakho, emqaleni wakho, emilenzeni, okanye kobuso bakho? Oh hayi? Iseli yolusu siseli lesikhumba. Iseli yolusu kubonakala ngathi ayikwazi ukufunxa i-coronavirus. Ngaphandle koko, besiya kungena emzimbeni wakho ngezandla. Nangona kunjalo, uSavelkoul uthi intsholongwane ingena emzimbeni wakho ngokusebenzisa 'iiseli zakho zempumlo' ngaphakathi kweeyure zokuchukumisa impumlo yakho ngezandla zakho.
"Oko kuthetha xa uchukumisa impumlo yakho; ukuba ngaphakathi kosuku isiqingatha sazo zonke iiseli zakho zempumlo zinosulelwe yi-coronavirusUthi.
Zithini ezo 'iiseli zempumlo' emva koko? chukumisa nje impumlo yakho. Ulusu olo, akunjalo? Ulusu ulusu; Nokuba isezandleni zakho, ezingalweni zakho, emilenzeni yakho okanye empumlweni yakho. Ke kutheni ingangeni ezandleni zakho ngaphakathi kosuku? Okanye ngaba ulusu lukhale ngeempumlo zakho; ebuthathaka eyahlukileyo? Ngaba iiseli zempumlo?
Ke yena ubhekisa ngaphakathi kwimpumlo yakho. Kodwa yafika njani apho? Emva koko kuya kufuneka ukhethe impumlo yakho. Kodwa oko akuyomfuneko. Emva kwayo yonke loo nto, kufuneka uchukumise impumlo yakho. Ke uSavelkoul ucinga ukuba intsholongwane inokwaluka ukusuka kulusu iye kungena ngaphakathi kwempumlo. Ngaphandle koko, ulusu lwempumlo ngokuqinisekileyo luya kuyithatha intsholongwane. I ENew York Times unika impendulo:
… Kuba intsholongwane yentsholongwane sukudlula kulusu. (nceda ujonge oko kuxwebhu)
Ke, ukuba siyayazi ukuba intsholongwane ayiphili ngokwayo, kunokutshiwo njani ukuba iyaphila kwiintsuku zentsimbi? Ubuncinci inokuphumla nje ngokulula kwinto ethile, njenge-CD-ROM inokubekwa etafileni, kodwa intsholongwane ayisiyiyo into ephilayo. Ayikwazi ukwenza i-cell cleavage ngaphandle kweeseli zomamkeli. Kwaye ukuba sele ubambe isandla somnye umntu okanye uthathe ingqekembe ekhoyo ikholonivirus, sibonile nje ukuba ulusu alukwazi ukuyithatha intsholongwane. Emva koko uphantse wanyanzela izandla zakho ukufunxa intsholongwane.
Ngaba umsipha wempumlo, ulwelo lwamaphaphu okanye ulwelo olungena emlonyeni lubamba i-coronavirus? Yintoni kanye kanye isilima? Siyazi ngoku ukuba ulusu alunakufunxa i-coronavirus. Ngapha koko, ulusu alunakufunxa nayiphi na intsholongwane. Emva kwayo yonke loo nto, ifana ne-CD-ROM kwaye ayinamsebenzi nokuba kukho i-movie yothando okanye imovie eyoyikisayo kuloo CD-ROM. I-CD yi-CD kwaye into eyithethayo ayinamsebenzi nokuba isetafileni. Umbuzo kukuba ngaba isixhobo sokudlala siyarekhoda i-CD-ROM. Ulusu aluyenzi loo nto, ngoko ke kufuneka ukuba lube ngumququ emlonyeni okanye empumlweni. Emva koko kuya kufuneka ukhuphe impumlo yakho ngononophelo, kuba intsholongwane ayinakonakala ngokwayo (ayisosibhakera okanye isibungu; yiphakheji yolwazi). Itsheki zokujonga News Today Nika impendulo:
Ayisiyongcinga imnandi kakhulu, kodwa ngalo lonke ixesha uginya, uginya umphunga kwipremix yakho ephezulu yokuphefumla. Ngapha koko, le yindlela ebalulekileyo yokuzikhusela. Oku kutshayela intsholongwane kunye neebacteria eziseleni zethu apho zifakwe khona i-asidi kwiisisu zethu. "
Oku ke kucingela ukuba i-mucus yenza umqobo phakathi kweeseli, umzekelo, ulwimi lwakho, umlomo wakho kwaye ngokunjalo neempumlo zakho; ngapha koko bekuya kuba kudala kakhulu ukuyihambisa kwisisu esiyekelelayo. Ngaba ukhona umntu onokundixelela ukuba isihogo intsholongwane ingena njani emzimbeni wam? Akukho sityholo nceda! Ndinombuzo oshukumisayo: “Ingena njani intsholongwane emzimbeni xa ulusu lungayifaki kwaye Ngaba kufuneka ndikhethe impumlo yam kuqala? Kutheni ke kufuneka sigcine umgama omde kangaka kwaye singavisisani izandla?"
Kukwanokwenzeka ukuba usulelo, oko kukuthi ukuphefumla kunye nokuthunga. Kodwa ukuba kukho umntu obhityileyo ebusweni bam, intsholongwane iyakufika kulusu lwam. Ngoku ndiyazi ukuba ayinakunyathela ngokwayo, ke ukuba ndihlambe ubuso ayizukungena empumlweni okanye emlonyeni. Kwaye ukuba ingena emlonyeni wam kufuneka ndiginye, kuba isisu sam siyayichitha intsholongwane (ngokwabakhangela News Today). Ke ayinakuba sisithukuthezi. Emva kwayo yonke loo nto, ulusu lwam ebusweni alunakufunxa intsholongwane.
Ngaba kuyinto esemphefumlweni? Oko ke kufanele ukuba kube ngumphunga wamanzi; Bayibiza ngokuba 'ngamaconsi entsholongwane'. Umphunga wamanzi uya kuthi emva koko uthathe intsholongwane njengenxalenye yokumdaka kwiparachute kwaye kufuneka ndingene neli lungu linamanzi. Ke kufuneka ihambe ngeempumlo okanye ngomlomo kwaye ngubani owaziyo, mhlawumbi iya kungena kwenye indawo. Ewe, kubonakala ngathi akunakulindeleka, ngaphandle kokuba uphefumlela umntu othe nkqo ebusweni babo zii-intshi ezi-10 kude. Kulungile, mhlawumbi isiqingatha semitha okanye imitha. Kulungile, mhlawumbi iinyawo ezintlanu. Kodwa kunokwenzeka ukuba uphefumlele ngaphakathi?
Emva kwayo yonke loo nto, amaqondo obushushu ngaphandle komzimba ahlala ephantsi kuneedigri ezingamashumi amathathu anesixhenxe, ke oko kuthetha ukuba umphunga ngokukhawuleza unyamalala kumphefumlo ngaphandle komzimba. Kufuneka ngokwenene nisondelelene ukuze niphumelele. Ke, kwi-theory, isenokuba khetho. Umbuzo omkhulu, nangona kunjalo, kukuba iiseli zingena njani emzimbeni wam.
Ngaba umntu othile angandixelela ukuba ndiyifumana njani i-coronavirus emzimbeni wam kunye nokuba zeziphi iiseli Kulungile zeziphi iiseli hayi ukumitha intsholongwane? Unokubhabha ngokujonga amagama afana 'neeseli zamanqina', iiseli zokubulala, iiseli ezibulala ngendalo, ii-cytokines kunye nabayaleli, kodwa oku kubonakala kungangamagama wentengiso kwaye hayi amagama enzululwazi. Ngoku sibone imifanekiso eyaneleyo. Unakho ukukhohlisa nawuphi na umfanekiso, unokwenza oopopayi be-3D kwaye ubonise iimodeli ezintle zekhompyuter zentsholongwane, kodwa ukuba ulusu lwam alunakukwazi ukufumana le ntsholongwane ndingathanda ukwazi into enye:
Ngaba kwenzeka njani ukuba i-coronavirus ingene emzimbeni wam! Nabani nceda !?
tags: Adam, ngco liseko, ingozi yokungcola, iiseli, abaphathi, intsholongwane ye-Corona, Covid-19, ii-cytokines, izandla, Huub, inkqubo yomzimba, Umbulali, endalo, ISavelkoul, umgca wokuzikhusela
4 Aprili 2020 kwi-10: 12
Le yinyani yokwenyani, kuba intsholongwane ayibhuqi emzimbeni wakho uphela. Ayinakuhamba.
4 Aprili 2020 kwi-11: 01
Jonga ukuba ithini le ndoda
4 Aprili 2020 kwi-10: 27
Omnye uyakuzibuza ukuba ngaba inyanzeliso kunye namapolisa ayinyanzela njani intsholongwane kaGawulayo ebulalayo ngelo xesha. Ngaba bakha bangena ebhedini yabafana ukuze babone ukuba kusetyenziswa irabha?
Kutheni le nto zonke iiklabhu ze-gay zingavalwanga ngelo xesha? njl
4 Aprili 2020 kwi-10: 38
Amantshontsho, abizwa ngcono njengabarhanelwa abaqhelekileyo, nawo akhasa kwimingxunya yawo ukubhengeza i-ajenda yawo. Yonke into yenziwe, lo gama sithetha ngeenkcukacha apha intsholongwane / iintsholongwane zihleka emanqeni. UTrump uchaze kakuhle "utshaba olungabonakaliyo" ...
Ubhubhani weCoronavirus Uya Kuhlala Utshintshe uMyalelo weHlabathi
NguHenry A. Kissinger
Epreli 3, 2020 6:30 pm ET
Inyani yile yokuba umhlaba awusoze uphinde ufane emva kwetyala. Ukuphikisana ngoku malunga nexesha elidlulileyo kuphela kwenza kube nzima ukwenza into ekufuneka yenziwe.
4 Aprili 2020 kwi-11: 38
Kwaye ungalibali !!!
Utshaba lwemozulu engabonakaliyo
Imigaqo engakumbi yenkululeko
4 Aprili 2020 kwi-11: 03
Ukusebenza kwempumlo kubonakala kufanelekile kum. Akukho nto malunga neseli zamakhala.
Apha unokufumana ibali malunga neeseli zamaphala, awuzange wenze uhlolo lwenyani. Kodwa kukho into malunga neeseli zamanxeba. Ngaba malunga neeseli ezivela kumaza okuphunga kwingqondo yakhe? Kwaye jonga malunga nokujova.
Kwaye inguqulelo yesiNgesi yecandelo elifanayo eTrouw.
Kwaye le yokugqibela ichaza into abayenzayo. Ke khusela kubahlaseli. Ngaba intsholongwane nayo kodwa icinga ngaphakathi.
4 Aprili 2020 kwi-11: 15
Iiseli zempumlo ngokucacileyo azibhekiseli kwinto enye kwaye ayikho into engaphantsi kweeseli ezimpumlweni. Ke ngaphakathi.
Kwaye kwakhona intsholongwane ayinakuhamba ulusu lwangaphandle yonke indlela ihamba phakathi kwempumlo nasemva ngaphakathi.
Intsholongwane ayisosibhakera okanye isibungu. Ayinakushukuma ngaphandle kweseli yeendwendwe kwaye ukuba iselfowuni yeendwendwe ayinayo imilenze yokuhamba ngaphandle komzimba, zonke iinketho azisekho.
4 Aprili 2020 kwi-12: 19
Ndiyavumelana nawe, ndongeza oku ukuxhasa ibali lakho. Ndithumele le webhusayithi apha ye-Kahn Uninversity. Ke ndingumxhasi ukuba icacile.
4 Aprili 2020 kwi-13: 10
Phezulu siyaqhubeka nophando. Ukucinga okuthembekileyo kunzima, kodwa siya kwenza konke okusemandleni ethu.
Ngokwenene asiqondi ukuba kutheni wonke umntu elele kakuhle. Kwaye konke ukucaphuka ku-FB kuba abantu kubonakala ngathi bayaphuma nale meko yemozulu. Iifoto zezindawo zokupaka ziphela kufutshane namahlathi kunye neelwandle. Kodwa ndicinga ukuba ezi sele zivaliwe? Ngaba usodolophu usenalo ilungelo? Uninzi luphendula ngokungathi lulunywe ngumdibanisi phantsi kwezo zithuba.
4 Aprili 2020 kwi-13: 12
Ukuba ubiza i-horde yamalungu e-IMB ukuba aphume ngomnyango, unokunikezela ngezopolitiko nge-alibi entle ezenzele ukuba inyanzelise ukuvala ngokupheleleyo.
4 Aprili 2020 kwi-13: 56
Ewe, ngokuqinisekileyo ulungile malunga naloo nto. Kulusizi kakhulu ngokwenene. Ndiyabuza ukuba kuya kufuneka banikezele ngamandla kwi-blockchain imini yonke. Kwaye kufuneka ukhathalele ukutya kwabo, bakunqunywe okanye baphile ngokwahlukileyo kwilifu.
Henk de Tenk wabhala wathi:
5 Aprili 2020 kwi-19: 18
Ii-IMB kungekudala aziyi kuvunyelwa ukuba zenze nantoni na kwii-IMB ezifundayo apha.
4 Aprili 2020 kwi-13: 49
Molweni nonke. Ugqirha webhayoloji. Isenokungasebenzi ngoluhlobo, kodwa ndiyazi into okanye ezimbini malunga nezinto ezincinci, kubandakanya iintsholongwane. Ubuncinci koko kufundiswa yile nkqubo.
Izinto eziphilayo zithathwa njenge ziphilayo ukuba ziyahlangabezana neempawu ezithile, ezinje ngokuvelisa kwakhona okanye ukuphindaphinda. Iintsholongwane yiphakheji yempahla yemvelo kuphela. I-Prion (isifo senkomo esihlanyayo) nangona incinci, ziiprotein, kodwa zombini zinepropathi yokuphindaphindeka ngaphandle kokuphoswa enye indlela "yobomi". Imalariya ayinakuzala kwakhona ngaphandle koncedo lweeseli zabanye abantu, kodwa le parasite ithathwa njengento ephilayo. Nokuba hai okanye ayiphileli ayinamsebenzi kangako, kodwa kukuxhomekeka / parasistim, kuba azizidalwa ezizimeleyo.
Okokuqala ulungiso oluncinci malunga nokuphawula kwinqaku elandulelayo, apho babethetha "ngokusinda" kwentsholongwane ngaphandle komzimba. Eli ligama elibanzi elinokuthi lidideke kakhulu, kodwa enyanisweni lilula kakhulu: nangona intsholongwane ingaphili, iphantsi kwemeko ezinobungozi ezivela kwindalo yayo (umzekelo ukukhanya), ke ixesha elide i-virus ishiye ngaphandle komzimba womntu okukhona kuchaphazeleka kwaye kokukhona kuncipha "ukusebenza" kwentsholongwane. Igama elingcono "ligcina ukusebenza".
Ngaphantsi kweemeko ezingcono, intsholongwane zinokuthi "ziphinde ziphile" ixesha elide, umzekelo ukukomisa ngaphandle, ungazigcina kubushushu begumbi kwaye zikhuselwe ekukhanyiseni IXESHA ELINGAKUMBI.
Ngoku impendulo kumbuzo ingaba ingena njani intsholongwane (okanye nayiphi na enye into encinci emzimbeni)? Ngoku akunakwenzeka ukuchaza kumhlathi wokuqala ukuba isebenza njani inkqubo ye-immune yabantu, kodwa oko akuyimfuneko (ngobunzulu obungaphezulu onokuziphelisa), apha ke ilula kakhulu: isithintelo sakho sokuqala sokuzikhusela kwihlabathi langaphandle ulusu lwakho. Esi sisithintelo ngokwasemzimbeni, udonga lokoqobo ekufuneka ligcine abantu bangaphandle, apha intsholongwane yakho yolusu nayo idlala indima ebalulekileyo.
Emva koko sikwabala kunye namathumbu ajikelezayo, athi angcungcutheke kwaye ke sisithintelo esibuthathaka, impumlo kunye neenwele zendlebe ezenza izithintelo zoomatshini kwaye njengoko kukhankanyiwe kwinqaku inkqubo yokugaya ukutya eyenza abahlaseli bangabi nabungozi. Kwezinye iindawo apho kungekho kolusu, kodwa besanxibelelana nehlabathi elingaphandle (imiphunga), iiseli zogonyo zisebenza, amajoni ahamba-hamba.
Kuphela ukuba umqobo woku-1 ukwazisa, umzekelo, inxeba lesikhumba njengomnyango ovulekileyo kwihlabathi elingaphakathi, ke amajoni omzimba aya kusebenza, kwaye kuphela ukuba amajoni omzimba asilela, ke unengxaki.
Kwimeko yeentsholongwane "ezithwele umoya", ezinokuthi zisasazwe emoyeni, oku kwenzeka ngamaconsi amanzi aqeshisiweyo aqukethe intsholongwane yeentsholongwane. Ngaphandle kweenwele zempumlo kunye nezinye izithintelo zoomatshini ezifana ne-mucous membranes kwi-mucous membranes, ezi ngandlela-thile zisafika kwindawo yegazi, ngesilonda okanye nge-membrane e-mucous apho bambalwa "amajoni okujikeleza" abekhona ngelo xesha.
Indlela intsholongwane engena ngayo ngaphakathi kwiseli libali elahlukileyo ngokupheleleyo. Iintsholongwane ziintlobo ezithile ezithile, ziyakwazi ukwenza iiseli "zokugebenga", oko kukuthi, imisebenzi eqhelekileyo yeseli efunyenweyo iyemiswa kwaye yonke imisebenzi idluliselwa kwimveliso kunye nokusasazeka kwezintso zentsholongwane. Le yimiyalelo ecacileyo engasebenzi kulo naliphi na ilizwe elamkelayo, yiyo loo nto iintsholongwane zihlala zichazwe ngokuthe ngqo. Awungekhe uqhube kuphela inkqubo yeWindows kwikhompyuter yeLinux okanye ngokuchaseneyo. Kwaye ekubeni ihlala iluhlanga phakathi kohlaselo nokuzikhusela, iintsholongwane ziye "zaphuhlisa" iindlela ezahlukeneyo zokuhlasela iiseli. Owona mzekelo uphambili wemifanekiso yile ntsholongwane ebonakala ngathi sisikhewu esincinci, isiphekepheke (okanye ihexagonal) engaphezulu equlathe izinto zemvelo, eqhotyoshelwe kwityhubhu enemilenze ezantsi kwale chu. Inqanawa intsholongwane iwela kwiseli, inamathela kuloo milenze kwaye yenzakalise izixhobo zofuzo kwiseli ngetyhubhu. Kukho ezinye iindlela zokukhohlisa iseli ukuze iseli ngokwayo izise izinto zangaphandle ukuze kunganyanzelekanga ukuba igonyelwe ngamandla.
Enye yethiyori kukuba intsholongwane iye yaluncedo lweebhaktiriya ukutshintshiselana ngemizila yemfuza, kwaye ekuhambeni kwexesha la masuntswana aqalisile ukukhokelela ubomi babo (indaleko) ... Kodwa nokuba yeyiphi na, indaleko ihlala isebenza Kwimeko efanelekileyo. Kwimeko ye-Synososis phakathi kwentsholongwane kunye nomamkeli -> kuluncedo lwegciwane ukuba umgcini aphile ixesha elide kangangoko ukuze umgcini akwazi ukusasaza intsholongwane kangangexesha elide. Kwimeko efanelekileyo, oku kukhokelela kwimeko apho amaqela omabini nawo enenzuzo enkulu, kwaye kwindalo kuhlala kubonwa ukuba into enokuthi kuqala ibe yiparasic kunye nobukrwada, iba noburhalarhume ekuhambeni kwexesha. Emva koko ukungathathi cala kuya kuba yingenelo. Umzekelo wale mitochondria ehlala kwiiseli zethu, ezinomjikelezo wazo wokuphindaphinda kunye nezinto zazo zemvelo. Ke ezi "ziibhugi" ezakhe zahlasela imizimba yethu zivela ngaphandle, kwaye ngoku asinakuphila ngaphandle kwazo, kuba i-mitochondria ibaluleke kakhulu ekukhupheleni amandla agciniweyo. Ukuba ukhubaza i-mitochondria, ukufa ngokukhawuleza kwesiphumo. Oku akunakuba yintsholongwane, kodwa ngumzekelo olungileyo obonisa indaleko.
Ke kubaluleke kakhulu ukuba uqaphele ukuba iisimpawu zisebenza kwaye ziphuhliswe ixesha elingakanani, njani kwaye kutheni. Le ntsholongwane ayisiyemvelo ngandlela zonke, ubundlongondlongo, ukuphinda ubonakale ngokuguqula okukhawulezileyo, njl njl. Akukhoathandabuzo ukuba le ntsholongwane, njengabazala bayo abasondeleyo njenge-Ebola, Intsholongwane kaGawulayo kunye nezinye, "yazalwa" kwilabhoratri. Ukuba kukho indawo yokugcina indalo (ibamba ngaphandle kwempawu kwindalo "yentsholongwane") apho intsholongwane inokuthi "ibaleke" kwaye oko ke kubangele ukonakaliswa kwindawo engaphandle kwentsholongwane. . Sisizathu esihle esibonakalayo esisibakala, kodwa ngokokuchatshazeleka koku, andisayi kuba ngaphaya kokutsho ukuba ayisiyi-100% into engenakwenzeka, kodwa ngokuqinisekileyo akunakulindeleka ukuba ndiyihoye le ndlela. Intsholongwane eNTSHA inokuba nobukrakra ekuqaleni, kodwa KUFUNEKA ibe buthathaka kamva. Leyo yinto engathi ayibikho kwimeko yentsholongwane yomkhuhlane (umkhuhlane) oqhelekileyo, ikho into engaqhelekanga eyenzekayo ...
Ke intsholongwane yendalo ayinakuze ibe NTSHA ngokwenene. Oku kunokwenzeka kuphela ukuba ukhulele kwilebhu! Iintsholongwane zendalo sele zivele kwindaleko, ngenxa yoko azinakuba zintsha (kwaye ngenxa yoko azikho mbi). Ungayenza ibe nzima njengoko ufuna, kodwa isiseko esingekabikho nzima kunokuba kunjalo.
4 Aprili 2020 kwi-16: 51
@DeOnschuld (HAYI NJENGOMNQOPHISO NGENXA YOKUXABULA)
Ewe, apha kule ndawo sinamava okuba abantu ngamanye amaxesha bazenza ngathi benjenje kwaye ngokwenene bafanelwe kukubambisa okutshutshisayo ukukhusela i-state propaganda, ke intshayelelo yakho yokuba uphumelele kwi-micorbiologist ufumana izimvo ezi-2 kum:
Inqaku loku-1: kufuneka siyicinge loo nto nangaphezulu: Ayisiyiyo i-Osterhaus? Asinguye uRonald Plasterk naye?
Inqaku lesi-2: Akusiyo imeko ukuba kwiidyunivesithi ufunda ikakhulu oko kuvunywe ngurhulumente / umzi-mveliso wamayeza kwaye ukuba uyaphuma ngaphandle embizeni, awuqondi amabanga akho?
Into endibethayo kukuba ujikeleza umba. Kwelinye icala, uyaqinisekisa ukuba intsholongwane ayiziphili ngokwayo, kodwa kwangaxeshanye inike ingxelo elahlekisayo ngokuthi "iMalariya ayinakuphindaphindeka ngaphandle kokusebenzisa iiseli zabanye abantu, kodwa le parasite ithathwa njengento ephilayo. Nokuba impilo okanye ayiphili ayibalulekanga kangako, kodwa kuya kubakho ukuxhomekeka / parasistim, kuba ayizizo izinto ezizimeleyo. UKUKHANGELA INFO
Uyila uluvo lokuba intsholongwane inokuthi iphile ngaphandle komzimba okanye ukuba ingayinto eyinambuzane. Oku kunokwenzeka kuphela ukuba ineseli eyingamkeli kwinto ehlala ihleli. I-coronavirus ayisosidambisi. Leyo asiyonyani.
Ukongeza, UNGAPENDULI umbuzo. Nguwuphi umbuzo obalulekileyo: Ingena njani intsholongwane emzimbeni wolusu? Ngelixa ngoku sisazi ukuba oku akuhambi kulusu, uzama ukunika umbono wokuba oku kunokwenzeka.
Intsholongwane ayinakuhamba. Chaza ukuba ingena njani phakathi kwempumlo ukuba ingaphandle kolusu kwaye ayinazo iiseli zokundwendwela ukuze uhlale uphilile.
Uyazama ukunika umbono wokuba intsholongwane ingaphila ixesha elide kwaye uyazi kakuhle ukuba, umzekelo, ugonyo lukhula kwiiseli zesibeleko. Ke intsholongwane enjalo yokuthintela isifo ihlala kwiiseli ezizihambelayo kwaye inokugcinwa kwifriza. Iiseli zeendwendwe zihlala zifuneka. Uyayazi kakuhle loo nto. Sukubhengeza ubuqhophololo apha.
"Kwaye ekubeni ihlala iluhlanga phakathi kohlaselo nokuzikhusela, iintsholongwane" ziye zaphuhlisa "iindlela ezahlukeneyo zokuhlasela iiseli. Owona mzekelo uphambili wemifanekiso yile ntsholongwane ebonakala ngathi sisikhewu esincinci, isiphekepheke (okanye ihexagonal) engaphezulu equlathe izinto zemvelo, eqhotyoshelwe kwityhubhu enemilenze ezantsi kwale chu. Intsholongwane ingena esiseleni, inamathela kuloo milenze kwaye ifake intsholongwane yemfuza kwiseli ngokusebenzisa le tyhubhu. ”
Uzixelele ukuba intsholongwane yipakethi yolwazi kuphela. Ngoku wenza umbono wokuba intsholongwane inokuyifaka into ngethumbu. Uxolo, kodwa ukwenza ngabom izinto zenza kancinane ukuba kubi kakhulu! Njengoko ukunamathela kungenako ukudibanisa ulwazi kwikhompyuter, kodwa ikhompyuter kufuneka inxibelelane nolwazi olukwi-sticky, kuya kusebenza okufanayo kwi-RNA kunye / okanye kwi-DNA yentsholongwane.
YONKE into oyithethayo ngokuyintloko inika umbono "wobungcali" kunye "nochwephesha", kodwa siyalazi eli qhinga KWIIMB'ers ze-STATE. Nangona usithi le ntsholongwane ibonakala ingengokwendalo ngazo zonke iindlela, ukongeza nje kokuphazamisa kumbuzo wokuba ithini: ingaba ibangelwa njani intsholongwane ye-covid-19 (ukuba sele ikhona), ngokufutshane, zeziphi iiseli ezithile intsholongwane, eyenza ulwazi luze luwusebenzise? Ngaba iiseli ezimhlophe zegazi, ngaba iiseli ezibomvu zegazi, ngaba ezinye iiseli?
NGEXESHA: Ingena njani intsholongwane emzimbeni?
Ngapha koko, awenzi lutho ngaphandle kokuqinisekisa ibali likaHuub Savelkoul, ngaphandle kokunika iimpendulo, kodwa ngokuyambatha ngoboya obuninzi. Ezi ziindlela ze-NLP, esingakwazi ukwahlula apha. Umzekelo, uthi:
Kwimeko yeentsholongwane "ezithwele umoya", ezinokuthi zisasazwe emoyeni, oku kwenzeka ngamachaphaza amdaka ajiweyo / aqhekezelelweyo aneentsholongwane. Ngaphandle kweenwele zempumlo kunye nezinye izithintelo zoomatshini ezifana ne-mucous membranes, ezi ndlela ngandlela thile ziye zifike kwindawo yegazi, ngenxeba okanye ngenwebu eluswini apho bambalwa “amajoni ajikelezayo” ngelo xesha. "
Ukuza kuthi ga ngoku ndiqinisekile ukuba anifaneleki njengomntu ozama ukubeka ingxoxo kwisareyi eyahlukileyo; idla ngokuqwalaselwa njengengqondo yombuso.
Umbuzo wokuba inokuba le ntsholongwane inosulela njani kwaye ungena emzimbeni awuphendulwa kwenye indawo ngaphandle kwenkohliso yoboya efanayo.
Ungakufunda oku kwizimvo zakho "ngandlela ithile ungene egazini", uyaqonda ukuba ulila kuphela. Ke HAYI.
4 Aprili 2020 kwi-19: 30
UMartin ulungile ukuba ungaphezulu kwayo. Baqhubeka bezama.
4 Aprili 2020 kwi-14: 11
Akukho nto imfutshane ngokumangalisayo ukuba akukho mntu ufuna ukukholelwa intsomi.
4 Aprili 2020 kwi-17: 50
kutheni imangalisa?! Iidola nazo zichaphazeleka kule ntsholongwane, yona inzima kakhulu.
4 Aprili 2020 kwi-14: 51
Bekumele ukuba ndiyifumene kudala le ntsholongwane, ndikuloliwe malunga nemini yonke. I-coronavirus ibiseNetherlands ngaphezulu kweeveki ezintathu. Ngokwazo inokusebenza kwaye kufuneka ihambe ngaphandle komgcini wezinto ezibonakalayo kunye nomoya? Well ngamanye amaxesha ndiyalibala ukuhlamba izandla zam kwaye ndibambe yonke into esitolo, iphi intsholongwane ke? Inyani, impumlo yenziwa nge-cartilage nje ngeendlebe zakho. Kodwa umbuzo kukuba ngaba ulusu olukwi-cartilage luyafana nobuso bakho. Kodwa ke intsholongwane inokuthi iphinde ifakwe ezindlebeni, ngaba uyafumana usulelo lwendlebe okanye ngaba ii-auricles zakho zibola? Owu, ukuba bekungenjalo ngendakuba ndinayo kwakudala kwaye izigidi beziya kosuleleka kwaye intsholongwane ayinakuyezwa kwaphela. Oko ke kuya kuphelisa ngokulula lonke uluntu nge-aristocracy. Kwaye kutheni uWuhan evula kwakhona njengesiqhelo? Ewe apho le ntsholongwane ibuyele umva kwaye ayinabungozi.
4 Aprili 2020 kwi-18: 17
Unxibelelwano no-Erasmus MC lwenziwe nabanye abaphandi. Ngokucacileyo inkqubo ye-Eugenics
4 Aprili 2020 kwi-21: 31
Mega ibalulekile into oyiqapheleyo apho !!!!!
Kwakhona jonga kwiipolitiki zakudala ezinjengeWouter Bos, zakha zaphi?
Oo bezopolitiko abafuna ukuthatha amandla nje ngequbuliso banomdla kwizibhedlele ???
I-Wouter Bos ishiya i-Amsterdam UMC -Zorgvisiewww.zorgvisie.nl ›Iindaba
2 jul. I-2018-Invest-NL yinkampani yaseburhulumenteni entsha enika oosomashishini ivenkile yokumisa yendawo enye kunye nesiqinisekiso kwaye ...
UWouter Bos ushiya i-VUmc kwaye abe yindoda ephezulu e ... - Volkskrantwww.volkskrant.nl> imvelaphi yeendaba ›Wouter-bos-ve…
Jun 29 Ngo-2018-uSihlalo weBhodi uWouter Bos weZiko Lonyango le-VU ngexesha lokuvula esibhedlele kwakhona. Isibhedlele sasibabini ngo-2015…
Wouter Bos ukukhokela ibhanki entsha yotyalo mali | NGOKU-I… www.nu.nl ›uqoqosho> i -outout-bos-goes-intsha-in…
Jun 29 Ngo-2018-Umphathiswa wezemali we-PvdA usengusihlalo webhodi yesibhedlele i-VUmc e-Amsterdam. Uza kuqala eyakhe…
Kucaciswa ukuba uWouter Bos usemdyarweni wokuba ngumlawuli we-… www.businessinsider.nl ›Ukwenza ishishini
UWouter Bos kuthiwa ekulo mdyarho wokuba ngumlawuli we-Schiphol ... Iinkcukacha ezizizo kukuba phantsi kolawulo lukaBos njengo-Mphathiswa we-Fina
5 Aprili 2020 kwi-16: 35
@camera, ukungcatsha kakuhle kuhlawula ihlazo kukwenza ungavunyelwa eMadododam.
5 Aprili 2020 kwi-16: 49
"Ikhowudi yeDutch Criminal Code kunye ne-Belgian Criminal Code ayiluboni ulwaphulo-mthetho lokuvukela umbuso."
… Kwaye abantu basacinga ukuba bahlala kwindawo yedemokhrasi ”UKUZE bayinkqubo ye-neo-feudal, hlala uzolile kwaye ulikhoboka kwi 😷
5 Aprili 2020 kwi-13: 05
@zalm, yimacabre ukubona ukuba le vidiyo yomsolwa oqhelekileyo ovela kwi-erasmus mc ihlala kwiimbono ezingama-666. Umyalezo ocacileyo ubonakala kum:
5 Aprili 2020 kwi-16: 36
6 Aprili 2020 kwi-16: 05
abarhanelwa abaqhelekileyo bakwazile ukucwangcisa yonke iminyaka kwaye ngoku balinde intlawulo ngokomgaqo-nkqubo weProfessional-Profit.
4 Aprili 2020 kwi-20: 22
Intsholongwane sele isemizimbeni yethu. Ingxaki kukuba ukusabela kwemichiza kwenzeka emzimbeni wethu obangela ukuba amajoni ethu omzimba aphulukane nolawulo.
Ungatsho ukuba yintoni ebangela oku: ixhala, i-4G, i-5G okanye iinethiwekhi ze-WiFi, isondlo, iinkqubo ezivela ngaphandle ngokusebenzisa ubuchopho, ugonyo njl.
IBill Gates ivula amasango kwaye uhlawula ityala.
Sele sinalo lonke ulwazi olukuye ngaphakathi, umbuzo kukuba ngaba sinalo phantsi kolawulo.
Ungoyiki into engena ngaphakathi, kodwa woyike into engena engaphandle 🤔
5 Aprili 2020 kwi-10: 35
Kusenokwenzeka nokuba intsholongwane ikukuba abo bafumene ugonyo, umzekelo, ugonyo kwiinyanga ezili-16 ezidlulileyo.
Iqala njani ukusebenza
isisombululo sokusombulula ingxaki (esona sisombululo siphambili sinokubakho sokuba umhlaba wonke uza kugonyelwa isitofu sokugonya esele sikhona kwishelufa ngaphambi kokuqhambuka kwetyala).
Kwaye yintoni eso sisitofu sokugonya kwaye zeziphi iziphumo zelizwe emva kokugonywa? Mhlawumbi inyathelo lokuqala elibalulekileyo ukusuka kulo lonke uluntu lwehlabathi ukuya kwi-transhumanism? okanye ngubani owaziyo ubhubhani omtsha oza kubulala abantu abangama-70%?
5 Aprili 2020 kwi-16: 32
Ilula njengoku, kodwa umntu uyalala. Isweleka ngabantu abaneempawu ezimbi kakhulu.
4 Aprili 2020 kwi-22: 37
Ugonyo kuphela oluya ngqo kwimibuzo onayo
5 Aprili 2020 kwi-10: 31
Stef Broekema wabhala wathi:
5 Aprili 2020 kwi-20: 46
Ngawaphi amabali ayinyani otshaba lwe "Corona" olungabonakaliyo?
-Bukho bungazange buve ubungqina benzululwazi
-Ayiyo pathogen eqinisekisiweyo, njengazo zonke ezinye iintsholongwane.
-Ingasenamzimba, yinto efileyo
-Impahla efileyo akufuneki ukuba ichasene neentsholongwane
Into efileyo ayinakunyuka
-Imicimbi efileyo ayinangqondo
-Ainokosuleleka yenye into
-I-0,012 micron ubukhulu, imaski yomlomo ye-FFP3 ineepores zemikrosini eyi-0,6, zonke ezinye iimaski zomlomo zineepores ezinkulu
Imaski yomlomo ayikaze idibane ne-100%
-Angabonakali phantsi kwemakroskopu ekhanyayo
Yonke imifanekiso yi (enjengesandi) yoopopayi
-Imvavanyo azicacanga kwaye azithembekanga
6 Aprili 2020 kwi-23: 32
UMartin ucacisa ividiyo enomdla malunga ne-anatomy of corona 'virus' evela kugqirha omnye 'u-Andrew Kauffman'.
Jonga ukuba iyavakala na okanye ayisi-disinfo.Andazi malunga neentsholongwane, kodwa andicingi ukuba ogqirha bayayenza na. Nyani ikopi nganye kuzo.
7 Aprili 2020 kwi-03: 02
Eyona disinfo igudileyo ijongeka ngokungathi ilindelwe ngabantu ... ukusuka kumagumbi asebusweni
Ungabonisa iifoto eziguqulweyo, ungabalisa ibali elide elide kwaye uzobe abantu ngokupheleleyo phantsi kovavanyo.
Konke kuyamangalisa, kodwa ividiyo yeYunivesithi yaseKahn ichaza ngokufutshane ukuba yintoni intsholongwane kwaye isebenza njani. Ayithethi ngokuba yenzeka njani intsholongwane kwaye ingena njani emzimbeni.
Le vidiyo yamagumbi asebupoliseni alawulwa ngoozwilakhe (bonke abakwimeko elungileyo kwaye ingekho 3 aphezulu emqolo kwi-Bijlmer) ke ngoko icekeceke kwaye inika umbono wokuba ungoyinyani, kodwa ikakhulu luhanahaniso kunye nefoto eyenziwe kakuhle. Akukho xesha elinye lithethwayo malunga nendlela esebenza ngayo intsholongwane.
Umbono 'kufuneka uqonde into' udibaniswe nombono 'uwushiye kwiingcali' .. Hayi, ewe unokucinga ngokuvakalayo nangokucacileyo kwaye unokuqonda kwaye ubone ukuba sidlalwa kwinqanaba eliphezulu. Kuya kufuneka uqonde ukuba enye imithombo yeendaba ibaluleke kakhulu (mhlawumbi ibaluleke ngakumbi) njengamajelo eendaba. Imithombo yeendaba ephambili ngumalusi. Imithombo yeendaba eyenye inika umbono wokuba ngomnye wethu, kodwa yingcuka kwiingubo zeegusha.
13 Aprili 2020 kwi-23: 27
"Intsholongwane ayinasifo ngezinto ezinokusetyenziswa"
“I-coronavirus ayidluliswanga ngooqu, iiselfowuni, izilawuli ezikude, iikati okanye kwizikhuhli zeenwele okanye iivenkile. Ingozi yongcoliseko ikhona ingakumbi xa abantu behleli iiyure ezininzi kwindawo emxinwa. ” Leyo luthando lukagqirha waseJamani uHendrik Streeck emva kophando kwindawo yaseHeinsberg kufutshane neSittard.
Prof.dr. Njengomlawuli weZiko leNzululwazi kwiYunivesithi yaseBonn, uHendrik Streeck (42) unomdla ikakhulu kwisiphumo se-coronavirus ebantwini kunye nokulwa amajoni omzimba. Uzixhasa kwizibakala hayi kwiimodeli zokubala ngokubanzi.
Njengomphenyi wokuqala, uStreeck neqela lakhe bahamba kwindlu ngendlu kumasipala ochaphazelekileyo waseGangelt (Heinsberg), apho intsholongwane yaqhekeka khona phakathi kuFebruwari emva kweseshoni yomtshato. Babuza umbuzo kwisigulana ngasinye kwaye iisampulu zithathwe emoyeni, kwaye ii-smears ezivela kumnyango ophathwayo, iifowuni eziphathwayo, izilawuli ezikude, izitulo zangasese, njl njl .Okufumanisa okokuqala kukuba abantu ababini kwabathathu abosulelweyo banesifo sokuphulukana nephunga kunye nokunambitheka kwiintsuku ezimbalwa. .
NgoLwesibini ngokuhlwa, uStreeck wamangaliswa ngokubhengeza iziphumo ezintsha kwintetho ye-ZDF show Lanz. “Ngoku siqinisekile ukuba iCovid-19 ayilososulelo lokunxibelelana. Akukho ntsholongwane ibe nye efunyenwe kwizinto, hayi nakwezona ntsapho zinosulelo kakhulu. Akukho kungcoliseka xa uthengile, kwizinwele zeenwele okanye kwiindawo zokutyela, ”utshilo ugqirha wezilwanyana uStreeck. "Isiphatho somnyango sinokuthinteleka kuphela xa kukho umntu ukhohlela ezandleni, ebamba isiphatho kwaye ngokukhawuleza emva koko omnye umntu uchukumise isiphatho."
13 Aprili 2020 kwi-23: 28
Utshintsho lwamva nje ... ingqina into endiyithandayo
Ukuphefumla kwesifundo 😉
Ngokukhawuleza ukuphuma ngaphandle kwe-Lockdown (ngaphandle kwee-software kunye neenkqubo zokulawula)!
13 Aprili 2020 kwi-23: 32
"Isiphatho somnyango sinokuthinteleka kuphela xa kukho umntu ukhohlela ezandleni, ebamba isiphatho kwaye ngokukhawuleza emva koko omnye umntu uchukumise isiphatho."
Ndathi, "Kwaye ke faka iminwe yakhe emlonyeni wakhe."
Owu hayi, kuba umhluzi ungayikhupha esiswini, apho ingathathanga khona (jonga inqaku lam).
Hei..bah..hayi ibali eliqine ngokwaneleyo
14 Aprili 2020 kwi-08: 57
Iilayibrari zivaliwe ukulungiswa iimitha ezili-1,5 njl
Ngoku ziyavula kodwa zizise iincwadi ekhaya.
Umntu oza kuyiboleka le ncwadi uyazi njani ngoku ukuba akukho mibungu, snot, spit, Virus kumaphepha encwadi.
Oku kunjalo ngokuhanjiswa kwasekhaya, akukho mntu unokujonga ukuba ngaba iPizzaboer ayinjalo
ukutyibilika okanye ukucuntsuza phezu kwePizza yakho okanye izandla zahlanjwa xa kulungiswa.
Ukungangqinelani sisininzi esiphezulu. Oku kungqina ukuba amanyathelo awonelanga, wonke umntu makaphakanyiswe kwisuti yenyanga
kwaye ungadli nto okwangoku, ukuze umhlaba wonke ugcinwe yedwa, okanye ngaba ngumgaqo wokwazi into encinci kwaye akukho ntsholongwane konke konke? oko kunokwenzeka
24 Aprili 2020 kwi-13: 33
Impendulo inokufumaneka namhlanje kwi-Telegreaaf, ngeeseli ezimpumlweni.
24 Aprili 2020 kwi-13: 38
Haha, ewe ndiyibonile phezolo .. umbuzo ngowokuba basuka njani elukhumbeni bangene ngaphakathi. Ukuhamba?
Emva koko kufuneka idluliselwe kwi-fluid ephefumlayo, kodwa oko kuya kufakwa kuhlobo olulandelayo. Baqala ke balinda oko ndikubhalayo.
25 Aprili 2020 kwi-23: 07
Mhlawumbi eli nqaku lisondele kwinyaniso,
UGqr Leibre wenze i-transistor encinci kangangokuba ingasetyenziselwa ukungena kwiiseli zolusu kunye nokuvavanya izinto zazo zangaphakathi ngaphandle kokuchaphazela imisebenzi edibeneyo
« I-Coronavirus: Zivela phi iintsholongwane kwaye zanda njani kwaye zihamba njani?
Eyona ngcinga inkulu: Leliphi ilizwe esiya kulakha emva kwentlekele ye-corona? »
Utyelelo lulonke: 2.614.838